ulo ụlọ 1 1/2 plan, Area banyere 70 sq, 2 ụlọ na kichin na a detached nchekwa ụlọ. Onwunwe dị banyere 15 km n'ebe ọdịda anyanwụ nke Lidén na banyere 55 km n'ebe ọdịda anyanwụ nke Sundsvall. The ibé emi odude ke a östsluttning anọ na akụkụ nke Holmsjön. The ụlọ e oandvänd ruo ọtụtụ afọ na-enweghị ọkụ eletrik, mmiri na sewers. ibé size 7 511 sq.
Akution na ngosi
Ụlọ na ala ere auction 3 Ka Bultgatan 14, Sundsvall.
Display Wednesday 25 April na 12.00, mgbe ngosi p 010-5760726 ụbọchị tupu tour.
The onwunwe nwere nweghị ọkụ eletrik, mmiri na idebe ihe ọcha. Heating bụ nanị site woodstove. The etiti ka nke osisi, mpụga n'ihu osisi ogwe, Ọwọrọ pịnye crawling ohere nke ihe / nkume, ụlọ na-agbakọta site mpempe akwụkwọ. The ụlọ nwere mkpa dị ukwuu nke ntaghari ohuru ma na- externally, mpio anwụrụ ọkụ bụ na ogbenye ọnọdụ, ọtụtụ windo na-agbajikwa.
Areal 7 511 sq, esịnede ahihia-ebupụta, na a obere òkè ọhịa. The ibé emi odude ke a östsluttning elu na echiche nke akụkụ ụfọdụ nke Holmsjön.
onwunwe Advertisement – kronofogden.se/3133.html.
Enforcement Ahịa Services
Gịnị bụ manye auction?
Ihe ere a ọha auction e foreclosed n'ihi nwe nwere adịghị akwụ ụgwọ ji. The ihe na-eresị site kotima.
Trafik i båda riktningarna leds om via av- och p&arin... GỤKWUO